Nzira yekubhadharwa sei mushure mekuchengetedza kukuvara kwakakomba kubasa - Social News Daily
Kuchengetedza kuvanzika kwako (uye ruzivo rwekufonera) paunenge uchitenga yako ...
Nzira yekubhadharwa sei mushure mekuchengetedza kukuvara kwakakomba kubasa
Kana wakakuvara pabasa, unogona kunge uchinetseka kuti ungaripwa sei nekukuvadzwa kwako. Izvi zvinogona kunge zvakaoma, asi nerubatsiro rwegweta remuripo wevashandi, unogona kuona kuti wawana mabhenefiti aunokodzera. Mune ino blog post, isu tichakurukura izvo zvekutanga zvekubhadharwa kwevashandi uye nzira yekuisa chikumbiro. Tichakupawo mazano ekutsvaga gweta rakanaka kuti rikumiririre.
1. Hidza gweta rekukuvadza
Kana wakakuvara pabasa, chimwe chezvinhu zvekutanga zvaunofanira kuita kuhaya gweta rekukuvadzwa kwako. Gweta rine hunyanzvi rinokwanisa kukubatsira kufamba nehurongwa hwemuripo wevashandi uye kuona kuti wawana mabhenefiti aunokodzera. Pamusoro pezvo, gweta rakanaka rinokwanisawo kukubatsira kana waunoshandira akaedza kupokana nezvauri kuda kana kuderedza kukuvara kwako. Pakusarudza gweta rekukuvadzwa kwako, zvakakosha kusarudza munhu ane ruzivo rwekubata zvikwereti zvemuripo wevashandi. Zvakare, nzvimbo yegweta rako yakakosha - ungangofanira kuenda kumatare edzimhosva nemisangano muguta guru redunhu rako, saka zvinobatsira kuve negweta rinoziva nezvenzvimbo iyi. Semuenzaniso, kana uchigara kuSouth Carolina unogona kutsvaga magweta ekukuvara kwemunhu muSummerville kana North Charleston. Izvi zvinokubatsira kutsvaga gweta rinoziva nezvevashandi's muripo system mudunhu mako.
2. Isa chikumbiro nenguva
Zvakakosha ku isa chikumbiro chemuripo wevashandi vako nokukurumidza sezvinobvira mushure mokunge wakuvadzwa. Munyika zhinji, une mazuva anosvika makumi matatu kubva pazuva rekukuvara kwako kuti unyore chikumbiro. Kana iwe ukamirira kwenguva yakareba, unogona kurambidzwa kugamuchira mabhenefiti. Paunoisa chikumbiro chako, iwe uchafanirwa kupa ruzivo nezve kukuvara kwako uye kuti yakaitika sei. Iwe zvakare uchafanirwa kuendesa magwaro ekurapa anotsigira kukuvara kwako. Mushandirwi wako anozowana mukana wekupindura kune chako chikumbiro. Kana ruzivo rwese rwaunganidzwa, sarudzo ichaitwa maererano kana iwe uchikodzera kubatsirwa. Zvakakosha kuziva kuti hurongwa hwemuripo wevashandi hwakagadzirwa kuti ive isina mhosva. Izvi zvinoreva kuti haufanire kuratidza kuti waunoshandira anga aine mhosva kuti kukuvara kwako kugamuchire mabhenefiti.
3. Ziva zvikomborero zvaunokodzera kuwana
Pane mhando ina dzemabhenefiti aungakodzera kupihwa mubhadharo wevashandi: mari yekurapwa, yekurasikirwa nemuhoro, mabhenefiti erufu, uye kugadzirisa mabasa. Mabhenefiti ekurapa anobhadhara mari yekurapwa kwako, kusanganisira kuchipatara, kuvhiyiwa, uye mishonga. Kurasikirwa nemuhoro kunotsiva chikamu chemubairo wako wakarasika kana usingakwanise kushanda nekuda kwekukuvara kwako. Mabhenefiti erufu anozopa rubatsiro rwemari kumhuri yako kana ukafa nekuda kwekukuvara kwako kubasa. Vocational rehabilitation ichakubatsira kudzidzirazve basa idzva kana kukuvara kwako kuchikutadzisa kudzokera kubasa rako rekare. Nyika imwe neimwe ine mitemo yayo maererano nekukodzera kubhadharwa kwevashandi, saka zvakakosha kuti utaure negweta munharaunda yako kuti uwane ruzivo rwakakwana. Zvinogona kunetsa kunzwisisa yese mitemo nemirau ine chekuita nemuripo wevashandi, asi gweta rine hunyanzvi rinokwanisa kukubatsira kufamba nehurongwa uye kuwana mabhenefiti aunokodzera.
4. Kwidza kana chikumbiro chako chikarambwa
Kana chikumbiro chemuripo chevashandi vako chikarambwa, une kodzero yekukwidza nyaya. Maitiro ekukwidza achasiyana zvichienderana nenzvimbo yako, asi kazhinji, iwe unozofanirwa kuisa chikumbiro chekunzwa mukati meimwe nguva. Pakunzwa, uchave nemukana wekupa humbowo uye humbowo hunotsigira zvauri kuda. Bhodhi rezvichemo zvemuripo wevashandi rinobva rasarudza kukodzera kwako kubatsirwa. Kana iwe uchiri kunyimwa mabhenefiti mushure mekuita kwekukwidza, unogona kuve nesarudzo yekumhan'arira mushandirwi wako. Nekudaro, zvakakosha kuti utaure negweta usati watora danho iri, sezvo mhosva dzinogona kunetsa uye dzinotora nguva. Kana wakakuvara kubasa, zvakakosha kuti uzive kodzero dzako uye kuti ungawana sei muripo waunokodzera. Nekutevera matanho ataurwa pamusoro, unogona kuwedzera mikana yako yekuwana mabhenefiti aunoda kupora kubva kukuvara kwako.
Kuhaya gweta rekukuvadzwa kwako ndiyo nzira yakanakisa yekuona kuti iwe unogamuchira muripo waunokodzera mushure mekukuvara kwakanyanya kubasa. Nerubatsiro rwegweta rine hunyanzvi, unokwanisa kufamba nehurongwa hwemuripo wevashandi uye wowana mabhenefiti aunoda kuti udzoke kubva mukukuvadzwa kwako. Bata gweta rekukuvadza munhu nhasi kuti tikurukure nyaya yako. Rombo rakanaka!
by SND Team 4 maawa apfuura 4 maawa apfuura